Zithini iimfuno zomtshato ecaweni? | IBezzia
Zithini iimfuno zomtshato ecaweni?
UMaria vazquez | 06/10/2021 10:00 | Umtshato
Esinye sezigqibo zokuqala ezenziwa ngabantu abatshatileyo malunga nohlobo lomtshato abawufunayo, ngokwaseburhulumenteni okanye ngokwenkolo? Ukuba nobabini neqabane lakho nigqibile tshata ngokwenkolo Ngaphantsi kwemithetho yeCawa yamaKatolika, kuya kubakho iimfuno ezithile oya kuthi uhlangabezane nazo.
Zithini ezi mfuneko zokutshata ebandleni? Owona uphambili kukuya kwipherishi yakho ukuze ufumane ukuba loluphi na uhlobo lwamaxwebhu ekufuneka uhambisile ngaphambi kokubhiyozela umtshato. Nje ukuba udibane nomfundisi weparishi, kuya kufuneka uthathe umtshato ngaphambi komtshato kwaye Qokelela amaxwebhu afunekayo ukuvulwa kwefayile yomtshato.
1 Fumanisa kumarhamente akho
2 Thatha ikhondo langaphambi komtshato
3 Khetha amangqina amabini okuthatha intetho
4 Hlanganisa amaxwebhu akho
Fumanisa kumarhamente akho
Ngaba uthathe isigqibo sokutshata ecaweni? Inyathelo lokuqala kukuya kwiparishi apho ufuna ukutshata khona unyaka omnye ubuncinci ukuyokwazisa ngazo zonke iimfuno kwaye gcina umhla wonxibelelwano.
Umfundisi weparish uyakwazisa ngazo zombini amaxwebhu ekufuneka uhambisile Phambi kokubhiyozela umtshato wakho wenkolo yamaKatolika, kunye nekhalenda yezifundo zangaphambi komtshato ekufuneka uzenzile kunye nesidingo sokwenza iinyanga ezimbalwa ngaphambi komtshato ukuthatha iintetho kunye namangqina amabini.
Thatha ikhondo langaphambi komtshato
Yenye yeemfuno zokutshata ecaweni. Ziqukethe uthotho lweeseshoni apho ibonakalisa usapho kunye nobomi kunye, ukuhlala kubunzima obunokubakho, ukusonjululwa kwempixano kunye nezinye iikhonsepthi zebhayibhile kunye nemigaqo yecawa malunga nomtshato kunye nokwabelana ngesondo.
Iiseshoni zobuso ngobuso zihlala ziiseshoni zeqela, behlangana kuzo izibini ezahlukileyo ezinomdla wokutshata kunye nomfundisi webandla. Inokwenziwa nakweyiphi na iparishi kwaye ikwakhona nakwi-Intanethi xa kunokwenzeka ukuba amanye amalungu esi sibini abe khona buqu. Ayizizo zonke iicawa ezibanika zona kodwa ngakumbi nangakumbi bayabheja kuzo izifundo zekhompyutha njengenye indlela.
Kufuneka zenziwe nini? Bahlala bexabisa iiseshoni ezininzi, ke eyona nto ilungileyo kukuthatha ikhosi yomtshato kwiinyanga ezintandathu ngaphambi komtshato ukuze ungabi noxinzelelo ngakumbi kunokuba kufanelekile xa usuku lusondela.
Khetha amangqina amabini okuthatha intetho
Enye imfuneko yokutshata ecaweni kukuthathwa kwamazwi, inkqubo apho bobabini abatshatileyo kunye neqabane lomtshato bethatha inxaxheba. amangqina amabini, elinye limele ilungu ngalinye lesibini. La mangqina kufuneka ahlangane nothotho lweemfuno: abe seminyakeni yobudala esemthethweni kwaye angadibani ngegazi kumaqela angena kwisivumelwano. Abakwazi ukuba zizalamane, kodwa kufuneka bazi ngokunzulu amaqabane omtshato.
Amangqina azakujongana nokubambisana, ephendula uthotho lwemibuzo ebuzwa ngumfundisi weparishi, ukuba utshate ngokukhululekileyo kwaye akukho sithintelo sokwenza njalo. Iya kuba ngumfundisi weparishi oza kubonisa umhla wale ntlanganiso, oqhele ukubanjwa kwiinyanga ezimbini okanye ezintathu ngaphambi komtshato.
Hlanganisa amaxwebhu akho
Iya kuba ngumfundisi wepherishi oya kuthi akwazise ngothotho lwamaxwebhu asisiseko oya kuthi uwanikezele ukuvula ifayile yomtshato, kodwa sele silindele ukuba iimfuno zomtshato wamaKatolika zezi efanayo kwiidayosisi ezahlukeneyo zaseSpain. Uya kudinga:
Ifotokopi ye-DNI, ipasipoti okanye ikhadi lokuhlala lelungu ngalinye lamalungu esi sibini.
Ifotokopi yefayili ye- Incwadi Yentsapho yabazali apho igama lakho libonakala libhaliwe.
Ubhaptizo kwababini abatshatileyo. Kuya kufuneka uyicele kwiparadesi apho ubhaptizelwe khona, unike igama lakho, ifani kunye nonyaka wokubhaptizwa.
Isatifikethi sokuzalwa ngokoqobo nganye yomtshakazi nomyeni. Iyacelwa kwiRegistry yoLuntu yedolophu yokuzalwa, ngokubanzi ngokuqeshwa.
Isatifikethi sokholo kunye nenqanaba. Iyacelwa irejista yobhaliso lwaseburhulumenteni ehambelana nedilesi yakho yesiqhelo, ngokubanzi ngokuqeshwa.
Isatifikethi sekhosi yangaphambi komtshato.
Kwimeko apho omnye wabatshati abe ngumhlolo okanye sele ekho sitshatile ngaphambili, Isatifiketi somtshato kunye nesatifikethi sokufa seqabane liya kucelwa kwimeko yokuqala kunye nesatifikethi sokuqhawula umtshato kwesesibini.
Urhulumente waseSpain uyawuvuma umtshato osemthethweni njengemthethweni, ngenxa yoko akuyi kubakho mfuneko yokuba ubhiyozele umtshato ngaphambili kwiRegistry yoLuntu okanye kwinkundla. Ukuba unayo, nangona kunjalo, kuya kufuneka ube nesatifikethi sakho somtshato waseburhulumenteni kunye nefotokopi yaso efanelekileyo.
Ngoku uyazi zonke iimfuno ezingaphambi kwe umtshato ogqibeleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Umtshato » Zithini iimfuno zomtshato ecaweni?
Imaski yobuso bekhukhamba kufuneka uzame
Iingcebiso zokwahlukana kweyona ndlela intle neqabane lakho